You searched for फोन पे - Page 105 of 111 - Tech News Nepal Tech News Nepal
मास्क लगाएरै मोबाइल ‘फेस अनलक’ गर्ने ट्रिक
एजेन्सी । अहिले विश्वभरका मानिसहरु कोरोना भाइरसको महामारी फैलिन नदिन सकेसम्म स्वास्थ्य सावधानी अपनाइरहेका छन् । त्यसमा संक्रमित तथा अन्यले भाइरसको रोकथामका लागि फेस मास्क प्रयोग गर्ने क्रम एकदमै बढेको
Published On : 14 March, 2020
एनसेलको ‘कल आयो पैसा पायो’ अफरमा थप सुविधा
काठमाडौंं । मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले अझ बढी बोनसका साथ आफ्नो ‘कस्टमर लोयल्टी’ कार्यक्रम अन्तर्गतको ‘कल आयो, पैसा पायो’ अफर सार्वजनिक गरेको छ । योजना अन्तर्गत ग्राहकले अब विश्वका
अनलाइनबाटै २६ मार्चमा सार्वजनिक हुँदै ह्वावे पीफोर्टी
एजेन्सी । ह्वावेले गत महिनाको अन्त्यमा पेरिसमा आयोजना हुने एउटा ग्लोबल इभेन्टमा पी फोर्टी र पी फोर्टी प्रो स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर कोरोना भाइरसकको त्रासको कारण
सामसङ ग्यालेक्सी ए७१ र ए५१ नेपाली बजारमा, यस्तो छ मूल्य
सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले ए सिरिज अन्तर्गत हालै ग्यालेक्सी एसेभेन्टी वान र तथा ग्यालेक्सी एफिफ्टीवान बजारमा प्रस्तुत गरेको छ । कम्पनीले आफ्नो अर्थपूर्ण आविष्कारका रुपमा यी फोनहरुलाई बजारमा ल्याइएको उल्लेख गरेको छ
कस्तो होला कामको भविष्य ?
प्रविधिमा विश्वसनीय इन्टरनेट कनेक्टिभिटी सँगै स्मार्टफोन, सामाजिक सञ्जाल तीब्र रुपमा विकास भइरहेका छन् । प्रत्येक क्षण यीनले हाम्रो ध्यानाकर्षण गरिरहेका हुन्छन् । त्यसो त यसको दुरुपयोग गर्नेहरुका लागि यसले जीवनमा
रमाइलोसँग यसरी खेल्नुहोस् गूगलको होली
काठमाडौं । आज र भोलि नेपाल, भारत लगायतका देशमा होली पर्व मनाइँदै छ । एक अर्कालाई रंगल लगाएर मनाइने यो पर्व विषेशगरी हिन्दु धर्मावलम्बीहरुले मनाउँछन् । तर, पछिल्लो समय यो
Published On :9March, 2020
यसरी छान्नुहोस् उपयुक्त मेमोरी कार्ड तथा एसडी कार्ड
एसडी कार्ड एउटा सानो कार्ड डिभाइस हो । यसमा भएको मेटल कन्ट्याक्टलाई यसले डेटाको रुपमा तीब्र गतिमा ट्रान्सफर गरिदिन्छ । एसडी कार्ड सबै क्यामेरादेखि मोबाइल हुँदै विभिन्न डिभाइसमा प्रयोग हुन्छ
१ अर्ब बढी मोबाइल ह्याकरको निशानामा, तपाईंको त परेन ? बच्न यसो गर्नुहोस्
एजेन्सी । अर्बभन्दा धेरै एन्ड्रोइड डिभाइसहरु ह्याक हुने जोखिममा रहेको खुलासा भएको छ । सेक्युरिटी अपडेटले ती डिभाइसहरुलाई सुरक्षा दिन नसकेपछि ती डिभाइसहरु ह्याक हुने जोखिममा परेको हुन् । डिभाइसमा
फाइभजीमा एसिया अगाडि हुने प्रक्षेपण, ६ वर्षमा प्रयोगकर्ताको संख्या १८० करोड पुग्ने
काठमाडौं । सन् २०२५ सम्म विश्वका एक अर्ब ८० करोड मानिस फाइभजीमा जोडिने एक अध्ययनले देखाएको छ । भर्खरैमात्र सार्वजनिक जीएसएमए मोबाइल ईकोनोमी सिरिज २०२० प्रतिवेदन अनुसार सन् अबको ६
जानिराख्नुहोस् गूगल अकाउन्ट सुरक्षित राख्ने यी १० तरिका
हाम्रो अकाउन्ट सुरिक्षत राख्न एकदमै जरुरी छ । एउटा गूगल अकाउन्टभीत्र तपाईंका कति महत्वपूर्ण विवरण, तस्विर, फाइलहरु, सम्पर्कहरु, टेक्स्ट म्यासेज, सर्च हिस्ट्री, लोकेसन हिस्ट्री जोडिएर बसेका हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईंले
केबल तार भूमिगत गर्ने टेलिकमको मोडालिटी अस्वीकृत
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा लथालिंग अवस्थामा रहेका केब तथा टेलिफोन तारको भूमिगत व्यवस्थापनका लागि नेपाल टेलिकमले बुझाएको मोडालिटी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फिर्ता गरिदिएको छ । टेलिकमले पेश गरेको मोडालिटी पर्याप्त
पठन संस्कृति विस्तारको यात्रा
सर्लाहीका ऋषिराम अधिकारीले एसएलसीसम्मको शिक्षा गाउँमै पुरा गरे । बुबा समाज सेवी । हरेकले पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्थे । त्यसका लागि हरेक गाउँमा स्कुल बनाउपर्नेमा उनको सधैं जोड रहने